Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆	41
Yesterday at 12:09am · အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖို့တ်ဝိန်းမြို့ နှင့် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ တို့ကို ညီအစ်မမြို့တော်များ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည့်အကြောင်း ၎င်းတို့၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် တရားဝင် စတေးတပ်စ် တင်၍ ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဖို့တ်ဝိန်းမြို့တော်၏ ညီအစ်မမြိုတော်သတ်မှတ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုံးမြင့်၊ မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးတိုးတိုးအောင် တို့၏ ညီအစ်မမြို့တော်သတ်မှတ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း၌ မော်လမြိုင်မြို့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်း အပေါ် နှစ်ဖက်မြို့တော်နှစ်ခုစလုံးအား ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဖို့တ်ဝိန်းမြို့တော်၏ ညီအစ်မမြို့တော်သတ်မှတ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မော်လမြိုင်မြို့သို့ မသွားရောက်မီ သံအမတ်ကြီးမစ်ချဲလ် နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မော်လမြိုင်မြို့တွင် အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း နှင့် နှီးနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်မှ ကျောင်းသားများနေထိုင်ရန်အိမ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံ၍ မြို့တော်နှစ်ခုအကြား အနာဂတ်တွင်ဆောင်ရွက်မည့် ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး နှင့် နှီးနှောဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
kai says: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလမှာ သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား က အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့တဲ့ – အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အကြီးတန်း ဒု လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Scot Alan Marciel ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အထက်လွှတ်တော်ကနေ ကန့်ကွက်မဲမရှိ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက် အင်္ဂါနေ့က အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်-မြန်မာဆက်ဆံရေး ပိုမို ခိုင်မြဲစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သမ္မတက အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marciel ကို အထက်လွှတ်တော်က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မနန္ဒာချမ်း က ဆက်ပြောပြပါမယ်။ြ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အကျိုးဆက် အနေနဲ့ ဘာတွေ ထူးခြားလာနိုင်ပါသလဲ
kai says: Scot A. Marciel is an American diplomat and is the Principal Deputy Assistant Secretary to the Bureau of East Asian and Pacific Affairs. He was the United States Ambassador to Indonesia from August 2010 until July 2013. Marciel has worked for the United States Department of State since 1985. He has served in various capacities abroad and in particular was the United States Ambassador to the Association of Southeast Asian Nations prior to his nomination in Indonesia. He isagraduate of the University of California, Davis and the Fletcher School of Law and Diplomacy.
kai says: Nay Zin Latt
kai says: U Win Nyunt
kai says: မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ပတ္တမြားဈေးကွက် လိုအပ်ချက်၏ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ မှ ၉၀ အထိ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း ဈေးနှစ်ဆ မြင့်တက်နိုင်ဟု လန်ဒန်အခြေစိုက် Gemfields ကုမ္ပဏီ ခန့်မှန်း
kai says: လုပ်တတ်ရင်.. ဘီလျှံနာတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ.. သိသာတယ်..။ ဈေးကွက်တခုလုံးရထားတာလေ..။
kai says: Tint SweFollow
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဂေါ် စကားနဲ့ဆို
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲဒါပေ့ါ.. စာသင်တော့ ဒုက္ခရောက်တာ..
why not တစ်ဆယ်ထောင် တဲ့… why not တစ်ရာထောင် တဲ့.. တစ်သိန်း အထိ သင်ပေးပြီးတော့ ရပ်လိုက်ပါတယ်.. ငါတို့မှာ သန်း.. ကုဋေ အထိ ရှိသေးပေမယ့်.. လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင် သိန်း အထိ သိရင် ရပါပြီ လို့…
kai says: “ ခု ၊ ဆယ် ၊ ရာ ၊ ထောင် ၊ သောင်း ၊ သိန်း ၊ သန်း ၊ ကုဋေ ၊
ကထူးဆန်း says: သိန်း ၊ သန်း ၊ ကုဋေ ၊
kai says: ဒေါ်လာလေးပါထည့်လိုက်ရ.. ပိုကောင်း…။
ဘီလျံဒေါ်လာ.. Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ခု ဆယ်​ ရာ ​ထောင်​ ​သောင်း သိန်း သန်း ကု​ဋေ
ဟဲဟဲ ငယ်​တုန်းက ​ကျောင်းဆင်းရင်​ အဲ့လို့ ​အော်​ပြီး ​ပြေးခဲ့တာ အမှတ်​ရ​သေး ​ဟေးးး ​ဟေးးး Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (သောင်း၊ သိန်းနဲ့ ကုဋ္ဋေကို နိုင်ငံအတော်များများမှာမသုံးပါ။)
kai says: ဂျပန်လည်း… ငွေထုတ်ထားတာမှာတောင် သောင်းတန်အရွက်ရှိပြီး..သောင်း Man 万 ကိုမူသေထားပြီး ပြောကြတာ..။
kai says: နှစ်ကူးတီရှပ်လုပ်မလားလို့.. ဒီဇိုင်းတွေးနေတာ…။ အနက်ရောင်တီရှပ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
သင့်အေးရိပ် says: အရင်ဆုံး အာ့ ဘာသင်္ကေတတွေလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါလား
kai says: ဟိုမှလေ… ကပ်ကျေးထောင်ပြနေတာ..။ အယ်ဒီတာ… ဖြတ်မယ်ပေါ့..။
အဲဒီတီရှပ်ထွက်လာလို့ကတော့.. အပျို/လူပျိုတွေ ၀တ်ရင် ပြဿနာမသေးဘူး.. ထင်တာပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: မိုက်လှချည်လား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဒို့သဂျီးက အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေလဲ ရသဟ
kai says: IT’S OFFICIAL: Gravitational waves have been detected, Einstein was right
သင့်အေးရိပ် says: . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော်ကြား အခက်ကြုံနေ
13 February 2016 09:08(+0630) .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတရာထူး တာဝန်ယူခွင့်ပြုရေးအတွက် မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြား အာဏာခွဲဝေရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေရာမှာ အခက်အခဲတချို့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
kai says: What presidents had foreign born parents?
kai says: C-SPAN February 16, 2016
သင့်အေးရိပ် says: RFA မြန်မာဌာန | သတင်းများ
အဲ့လို သွားမေးရတဲ့ သဘောကော…သက်ရောက်မနေဘူးလား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပြီးခဲ့တဲ့တခေါက်ကဒေါ်စုနြ့ကာချုပ်တွေ့တာမှာ.. ပါသွားတဲ့သူတွေထဲ… ဦးဝင်းထိန်ကတောင် ကာချုပ်ကို အလေးပြုလိုက်တာမှတ်မိသေးသမို့.. တခုခုမတိမကျဖြစ်နေသလားလို့..။
kai says: Thet Naing Soe ဒီရက်ပိုင်း Apple နဲ့ အမေရိကန်အထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ FBI တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ တင်းမာမှုဟာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ပြသာနာစတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ၊ San Bernardino မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူတွေကို သေနတ်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ်ခတ်သူ ၂ ဦးအနက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Syed Farook ရဲ့ iPhone ထဲကအချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စကနေစတာပါ။ ဒီပစ်ခတ်မှုမှာ လူ ၁၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်သူ Farook ဆီကနေ ၄င်းကိုင်ဆောင်တဲ့ iPhone 5c ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။ FBI ကနေ ယင်း iPhone 5c ထဲမှာပါတဲ့ Farook ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာ iPhone က Passcode ချထားပြီး FBI အနေနဲ့ Apple ရဲ့ Encryption စနစ်ကိုမကျော်နိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ Passcode တွေကိုကြိမ်ဖန်များစွာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်း မှားတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်များလာရင် ဖုန်းထဲက ရှိသမျှ User data တွကို ဖုန်းရဲ့ iOS စနစ်က အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ FBI အနေနဲ့၎င်းတို့မတတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး iPhone ထုတ်လုပ်သူ Apple ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။ တရားရုံးကလည်း ဒီ iPhone 5c ကို Unlock လုပ်ဖို့ FBI ကတောင်းဆိုတာကိုကူညီပေးဖို့ Apple အားအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ FBI ကနေ Apple ကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စကလည်းတော်တော်ကြီးပြင်းထန်ပါတယ်။ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ FBI အတွက် Custom Firmware တည်ဆောက်ပေးရမှာပါ။ FBI အတွက်တည်ဆောက်ပေးရမယ့် iPhone Firmware ဟာ ပုံမှန်သုံးစွဲနေကြတဲ့ iOS version တွေနဲ့ကွာခြားမှုရှိမှာပါ။ ဒီ Custom Firmware Version အတွက် FBI ကနေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ အဓိကအားဖြင့်အချက် ၃ ချက်ပါဝင်ပါတယ်။
သင့်အေးရိပ် says: အိုက် လူဆိုးကြီးဆီက ရတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးထဲကိုပဲ…FBI က အချက်အလက် စစ်ဆေးလို့ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်လို့ မြဝူးလား… ။
သက်သက်…အကျယ်ချဲ့နေကြသလိုပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: iPhone ရောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေတာပါ…။ အကောင်းဆုံးမားကက်တင်းလေ..။
ယူအက်စ်ကုမ္ပဏီတွေ အဲလိုပါပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: Aung San Suu Kyi inspires University of Oxford to help Myanmar
သင့်အေးရိပ် says: သား နှစ်ယောက်နဲ့ ချွေးမနှစ်ယောက် လူ ၄ ယောက်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်လို့ရှိရင် ဒီပြဿနာတွေအားလုံးက ပြေလည်သွားမှာပဲ။ ဘာမှ ကျနော်တို့ ဒါကြီးကို ၅၉(စ) တွေ ဘာတွေ ပြင်ဖို့ မလိုပါဘူး။ လူ ၄ ယောက်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ လုပ်တာက ပိုပြီးတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြီးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ရေးကို ပြောဖို့တောင် မလိုပါဘူး။…..
ဆိုပဲ….. လွတ်လပ်စွာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်တို့ဘာတို့….
kai says: FB မှာတော့ ဦးရဲထွဋ် အောက်ကအတိုင်း ထုတ်နှုတ်ထားတာကို.. သူ့အောက်ကအတိုင်းကျုပ်သွားရေးထားတယ်..။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဥာဏ်ကြီးပါပေ့ ဒို့သဂျီး
kai says: ပုဏ္ဏားမျိုး ၉-ပါး။ ။ ၎င်းင်း သရုပ် အဓိပ္ပါယ်ကို ဓမ္မသတ်ကျမ်းမှ ယူသည်။
ခင်ဇော် says: ၁၀) ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ ပုဏ္ဏားမျိုး၊ လည်း ရှိတယ်။
kai says: February 16, 2016
kai says: https://www.scribd.com/doc/300424352/Myanmar-Gazette-D87-March-2016
kai says: Sann Ni